As of Fri, 29 May, 2020 15:50
बुधवार, कार्तिक २९, २०७४
५ सयमा झर्ला नेप्से परिसूचक ?
कम्पनीहरूको सेयर मूल्य अनन्त कालसम्म वृद्धि हुँदै जाँदैन । कुनै बेला तल झर्नैपर्छ । माथि जाने र तल झर्ने समय र बिन्दु पूर्वघोषणा गर्न सकिँदैन । सेयरको माग बढ्यो भने मूल्य बढ्ने र माग घट्यो भने मूल्य पनि घट्ने हो । तसर्थ सेयरको माग बढ्ने या घट्ने सही प्रक्षेपण गर्न सकियो भने सेयर बजार सूचक नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्ने वा उकालो लाग्ने पनि पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।
बजार अनुगमनप्रति निजी क्षेत्रको सवाल
सरकारले विशेष गरी २०३२ सालको कालोबजारी ऐनमा टेकेर त्यसका आधारमा विभिन्न व्यापारीमाथि धरपकड गर्ने, थुन्ने वा हमला गर्ने काम गरिरहेको छ । यो अत्यन्तै दुःखद हो । निजी क्षेत्रले बजार अनुगमन हुनु हुँदैन भनेकै छैन, तर बजार अनुगमनलाई अनुगमन गर्ने निकायको कमाइ खाने भाँडो बनाउनु भएन भन्दै आएको छ । सँगसँगै राज्यले जुन काुननलाई आधार मानेर बजार अनुगमन गर्दै छ उक्त ऐन धेरै पुरानो छ । नियोजित अर्थव्यवस्था भएको समयमा बनेको यो कानुनले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन भन्ने निजी क्षेत्रले सरकारलाई पटक–पटक भन्दै पनि आएको छ ।
आइतवार, कार्तिक २६, २०७४
मार्जिन कारोबार, व्यवस्था र सुधार
धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबार निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले सेयर बजारमा थोरै पैसामा धेरै सेयर किन्न चाहने वा आफूसँग भएको भन्दा बढी पैसाको सेयर किन्न चाहनेलाई बाटो खुला गरेको छ । तर, यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वय तथा नीतिगत र पूर्वाधारको थप विकास हुनु आवश्यक छ ।
बुधवार, कार्तिक २२, २०७४
साइबर सुरक्षामा पर्याप्त सावधानी अपनाइरहेको दाबी गर्दागर्दै फेरि नेपाली बैंकिङ क्षेत्र स्विफ्ट ह्याकरको सिकार बन्न पुगेको छ । हुन त संयोग पनि हुन सक्छ । नेपालको कुनै एउटा बैंक स्विफ्ट ह्याकको सिकार भएको समाचार बाहिर आउनुभन्दा ठीक एक हप्ताअगाडि ताइवानको ‘बैंक फर इस्टर्न इन्टरनेसनल’ को स्विफ्ट प्राणाली ह्याक गरी अनधिकृत रूपमा करिब ६ करोड डलर बराबरको रकम स्थानान्तरण गरेको आरोपमा श्रीलंकामा दुई जना पक्राउ परेको समाचार पनि सँगै आउँदै थियो ।
सोमवार, कार्तिक २०, २०७४
समृद्धिको आधार महिला विकास
संसारका थुप्रै मुलुक विकासशीलबाट विकसित अवस्थामा फड्को मारिसकेको परिप्रेक्ष्यमा केही ढिलै भए पनि नेपाल अब समृद्धिको मार्गमा लम्कन्छ कि भन्ने आभास हुन थालेको छ । जब नेपालमा संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको थियो, त्यो संविधानको समर्थन गर्ने मुलुकहरू थुप्रै भए पनि नेपालको छिमेकी मुलुकले त्यसलाई स्वागत र समर्थन गर्न सकेन । उसैको कारणले नेपाल झन् बर्बादीको खाडलमा त जाँदैन ? भन्ने प्रश्न पनि तत्कालीन समयमा उब्जिएको थियो ।
मार्जिन ट्रेडिङका चुनौती
पछिल्लो दुई वर्षयता भएका नीतिगत सुधार, नयाँ व्यवस्था र सक्रियताका कारण नेपालको पुँजीबजार नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड चर्चामा आइरहेको देखिन्छ । आधा दशकअगाडि धितोपत्र बजार र बोर्डको चर्चा अर्थजगत्का विज्ञहरूमा मात्र सीमित थियो तर केही समययता आमसर्वसाधारणसमेतमा यससम्बन्धी चर्चा र चासो बढ्दै गएको छ, जसलाई पुँजीबजारको विकासका निम्ति सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ ।
अर्थ हराएको निर्वाचन
लोकतन्त्रमा निर्वाचनको ठूलो महŒव छ । किनकि लोकतन्त्रमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै बहुसंख्यक जनताका विचारको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, निर्वाचन गरिँदैमा लोकतन्त्र कायम नै हुन्छ भन्न भने सकिन्न । जहाँ उम्मेदवारका घोषणापत्रका प्रतिबद्धताको सतांशसमेत पूरा गरिएको या त्यसका लागि प्रयासरत भएको देखिन्न, त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन । हाम्रो काठमाडौं उपत्यकातिर हेरौं, जुन सबैको आँखा पर्ने ठूलो बजेट भएको क्षेत्र हो । यहाँको लथालिंग फोहर, खानेपानी, ढल, बाटोको हविगतले यो क्षेत्रमा कैयौं पटक निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको खिल्ली उडाउँछ ।
शुक्रवार, कार्तिक १०, २०७४
ओबरबाट नेपालले फाइदा लेला ?
चीनले ओबरमार्फत ‘विश्व्यापीकरणको नयाँ युग’ आरम्भ हुने बताएको छ, तर पश्चिमका मुलुकले यसलाई दोस्रो विश्युद्धपछि अमेरिकाले अघि सारेको ‘मार्सल प्लान’को छायाका रूपमा लिने गरेका छन् । ओबरमा अहिलेसम्म ६८ देशले सहभागिता जनाएका छन् । ६२ अर्ब डलरको चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरमा सडक सञ्जाल, विद्युत्गृह, कारखाना तथा रेलमार्ग निर्माण गर्दा पाकिस्तानमा १० लाख रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
इटाइपु बाँध र हाम्रो नियति
इटाइपु (सिङ्गिङ रक) बाँध बाँध पाराग्वे र ब्राजिलको सीमा भएर बग्ने साझा नदी–पारनामा अद्वितीय रूपमा बनेको छ । चौबीसै घण्टा १४ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्षम यो आयोजनामा दुवै देशको आधाआधा रहने गरी २ हजार ८ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । प्रतिटर्बाइन ७ सय मेगावाट क्षमता भएको २० वटा भीमकाय टर्बाइनमा १० वटा ब्राजिलको जनशक्ति र बाँकी १० वटा पाराग्वेको जनशक्तिले रेखदेख गर्दै आएको छ । तर, दुवै देशको जनशक्तिले समन्वयमा सहकार्य गरी कार्यसम्पादन गर्ने गरेको छ । सन् २०१६ मा यसले संसारकै सबैभन्दा ठूलो भनेर चिनिएको चाइनाको थ्री गर्जेज आयोजनाले भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादन गर्न सफल भयो ।
बिहिवार, कार्तिक ९, २०७४
नेपालमा विकास होला ?
सशस्त्र आन्तरिक द्वन्द्व सकिएको पनि एक दशकपछि नयाँ संविधान लागू भई यसको कार्यान्वयनका क्रममा चरणबद्ध निर्वाचनहरू हुन गइरहेका छन् । नयाँ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने नयाँ संरचना गरिएका प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । तत्पश्चात् नेपाल वास्तविक रूपमा संघीय संरचनामा जानेछ । संविधानले स्पस्ट रूपमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी छुट्याएको छ । अब साँच्चै नेपालले विकासको बाटो समात्ला कि भन्ने आशा आममानिसमा छ ।
महिला र पुरुषले सेयरमा लगानी गर्ने तरिका
सेयर कारोबारमा लिंगको प्रभाव उनीहरूले कमाउने नाफामा पनि देखिएको थियो । अध्ययनमा पुरुषले धेरै कारोबार गरे पनि महिलाले बढी प्रतिफल कमाएका थिए । सेयर बजारको सत्य पनि यही हो, कारोबारीभन्दा दीर्घकालीन लगानीकर्ताले बढी नाफा कमाउन सफल हुन्छ । सेयर कारोबारमा पुरुषले बढी किनबेच गरेका थिए भने महिलाले बढी होल्ड गरेका थिए । यसको अर्थ महिलाले बाइ एन्ड होल्ड रणनीति अपनाएको पाइयो भने पुरुष छिटो–छिटो कारोबार (ट्रेडिङ) गर्न रुचाउने देखियो ।
बिहिवार, आश्विन २६, २०७४
एनआरएनमा नयाँ नेतृत्व र कार्यदिशा
नेपाल र नेपालीको हितका लागि सुरु गरिएको अभियान पछिल्लो पटक राजनीतिक हस्तक्षेपसहित धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको चलखेल बढिरहेको महसुस गरिएको छ । अबको ८ औं अधिवेशनमा चुनिने नेतृत्वले अलि बढी मेहनतका साथ सफा गर्नुपर्ने देखिन्छ । गलत प्रवृत्ति त नभनौँ, तर टिपेर नेतृत्व ल्याउने प्रवृत्तिले कुनै पनि संघसंस्थालाई अहिलेसम्म राम्रो गरेको देखिँदैन । यो अभियानमा सुरुदेखि नै लागेका र यसको कार्यदिशा तय गरेका अग्रज र बीचबीचबाट फुत्त आउने नेतृत्वबीचको लडाइँमा एनआरएनए अभियान अलि धमिलिन पुगेको महसुस गरेको आभास यस संस्थामा आबद्ध धेरै सदस्यले अनुभव गरेको अवस्था छ ।
बुधवार, आश्विन २५, २०७४
चिनियाँ उपभोक्ता बजार र ओबरले दिएको अवसर
‘बेल्ट एन्ड रोड’ संरचनामा नेपाल अघि बढिसकेको अवस्थामा सम्भावनाहरूको खोजी र कार्यान्वयनतर्फ अबको पहल कदमी जरुरी देखिन्छ । जोडसञ्जाल भने पनि यसको अन्तिम लक्ष्य दुईपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धन र समृद्धि नै देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो नजिकैको बजारमा हाम्रा सम्भावना र अवसरहरूबारे हामी नै तदारूकताका साथ लाग्नुपर्छ ।
शनिवार, भदौ ३१, २०७४
आर्थिक स्तरोन्‍नतिको मृगतृष्णा
केही समयअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफू हङकङमा जाँदा नेपाली पासपोर्टका कारणले अनावश्यक रूपमा अध्यागमनको सोधपुछमा परेको आपत्ति जनाएपछि त्यसबारे धेरै भुक्तभोगीले अनुभव बाँडे ।
बुधवार, श्रावण ४, २०७४
समुदाय र अभियानमैत्री सहकारी कानुन
नेपालको संविधान, २०७२ को घोषणा भई कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेपछि राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दा टुंगिएका छन् । मुलुक सुशासन, आर्थिक समृद्धि एवम् आत्मनिर्भरताका लागि अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारीको प्रस्थानबिन्दुमा उभिएको छ । यद्यपि संविधानप्रतिको असन्तुष्टि व्यवस्थापन र राजनीतिक रूपमा कार्यान्वयनका कामहरू बाँकी नै छन् ।
एक दर्जन बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क घट्यो